नेकपा विवादः बढ्दै गरेको जनआक्रोश र संभावित परिणाम
जनतापाटी आइतबार, साउन २५, २०७७ मा प्रकाशित
भनिन्छ, अति भएपछि खति हुन्छ । अहिले सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवाद र त्यस विवादमा जोडिएका नेकपाका उच्च नेताहरुको व्यवहारबाट आम कार्यकर्ता र जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । त्यो आक्रोश सडकमा पोखिने अवस्था आयो भने त्यसले निकै भयानक रुप लिने छ र त्यसको परिणाम नेकपाका नेताहरु मात्र होइन, सिंगै पार्टी पङ्क्ति र देशले नै भोग्नु पर्ने निश्चित छ ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा वादविवाद, वहस हुनु स्वभाविक हो । पार्टीमा गुट, उपगुट हुनु पनि स्वभाविक हो । तर, जब राजनीतिक पार्टी भित्रको वाद विवाद र वहस सिंगै देशको भविश्यसंग जोडिन्छ, तब त्यो स्वभाविक परिघटना हुंदैन । अहिले नेकपा भित्रको विवाद केवल उक्त पार्टीको भविश्यसंग मात्र जोडिएको छैन, सिंगै देशको राजनीति र ‘समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली’को भविश्यसंग जोडिएको छ । किनकी राणा शासनको अन्त्यसंगै शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले देशको समग्र विकास प्रकृया नै अवरुद्ध भयो ।
नेपाल भन्दा पछि आधुनिक विकासको प्रकृया शुरु गरेका, वैदेशिक उपनिवेशबाट मुक्त भएका वा निरंकुश शासनबाट मुक्त भएका देशहरुले विकासको प्रकृयामा निकै ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । नेपाल चांही लगभग जहांको तंही छ । प्राकृतिक रुपमा तथा दाताहरुले थोपरेका केही विकासहरु वाहेक अरु विकासका प्रकृयाहरु अवरुद्ध छन् । त्यो अवस्थाबाट मुक्ती पाउने प्रयास स्वरुप गएको आम निर्वाचनमा नेकपाले अत्यधिक बहुमत पाएको कुरामा शंका छैन । र, त्यो बहुमत कुनै नेता विशेष वा समुहको कारणले मात्र पाएको होइन ।
कम्युनिष्ट नेताहरु विकास प्रेमी हुन्छन्, प्रगतिशिल हुन्छन्, उनीहरुले मौका पाएमा गरेर देखाउंछन् भन्ने जनविश्वांसका कारण नेकपाले संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय गरी तिनै तहका सरकारहरुमा अत्यधिक वहुमत पाएको थियो । र, गर्न चाहेको भए यो ५ वर्षको अवधिमा विकासमा धेरै फड्को मार्न सकिने अवस्था थियो । कम्तिमा देशको विकासको प्रारुप तयार गर्न र त्यसको ‘कास्टिङ’ देखाउनको लागि ५ वर्षको समय प्रयाप्त हुने थियो । तर सत्तामा पुग्ने वित्तिकै नेकपा नेताहरुले देखाएको लिच्चड प्रवृत्तिले समर्थक शुभेच्छुकहरु मात्र होइन, पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु नै पार्टी प्रति विरक्तिदैं गएको अवस्था छ ।
नेकपाका उच्च नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गरि कारवाही गर्नुको साटो चोख्याउने प्रयत्न गर्नु, संवैधानिक निकायहरुले नै डामेका वा कारवाहीको दायरामा राखेका भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति दिलाउनु, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं आम जनतासंग, देशको विकास प्रकृयासंग खासै सरोकार नराख्ने अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसि), अन्य पार्टीहरु भित्रको विवादमा अनावश्यक हस्तक्षेप र चासो राख्ने, चुनावमा पराजित नेताहरुलाई नै संसदमा लैजाने, मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल गर्ने प्रवृत्तिले नेकपाको साख निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । त्यसमाथि विगत केही महिनादेखि देखिएको विवादले त नेकपाको नेतृत्वप्रतिको कार्यकर्ता समर्थक, शुभेच्छुक र आम मतदाताको विश्वांस पूर्णरुपमा उठिरहेको छ । उनीहरुको लागि ओली ठीक कि प्रचण्ड, नेपाल ठीक कि खनाल वा गौतम भन्ने प्रश्न नै होइन । नेकपा ठीक कि बेठीक भन्ने हो । किनकी ती नेताहरु जो सत्तामा पुगे पनि कार्यकर्ता समर्थक, शुभेच्छुक र आम मतदातालाई केही फरक पर्दैन । र, उनीहरुको चासो ती नेताहरुको सत्तारोहण वा सत्ताबाट बर्हिगमन होइन, विकास प्रकृयासंग हो । जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनुन, विकासको रफ्तार बढ्नु पर्छ भन्ने हो ।
दुर्भाग्य नेकपा भित्रको विवादले विकासका सम्पूर्ण प्रकृयाहरु अवरुद्ध भएको छ । शासकिय सुधारका कुराहरुको धज्जी उडाएको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । त्यसले सर्वसाधारण जनता, नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरुमा पनि एक प्रकारको उकुस मुकुसको अवस्था सृजना गरेको छ । यो कुरालाई महसुस गरेर नेकपाका नेताहरुले तुरुन्तै पार्टी भित्रको द्धन्द व्यवस्थापन गरेनन्, देशमा भयानक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने र जनता सडकमा उत्रने लगभग निश्चित छ । त्यसपछिको परिणाम के होला ? संभवतः राजनीतिक पण्डितहरुले पनि आंकलन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैले अहिले धेरै नेता, कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकको साथै आम नेपालीहरुले चाहिरहेको एउटै कुरा हो- नेकपाका उच्च नेताहरु होसमा आउ । भदौमा आंखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ भनेझैं गरि सधैभरि सत्तामा लिलिपुट गर्न सकिन्छ, जनता, कार्यकर्ताहरुलाई भ्रममा राखेरै कुर्सीको दौड जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त होउ ।
सहकारीले नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउने २२ मिनेट पहिले
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? ३७ मिनेट पहिले
कोसीमा हाम फालेका दाहाल बेपत्ता ५७ मिनेट पहिले